🥇 ▷ Codsiga WhatsApp ee loogu talagalay Mac iyo PC ayaa laga yaabaa inuu goor dhow yimaado ✅
Codsiga WhatsApp ee loogu talagalay Mac iyo PC ayaa laga yaabaa inuu goor dhow yimaado
Ugu dambeyntii ma arki karnaa dalab WhatsApp oo asal ah oo loogu talagalay kombiyuutarrada Mac iyo PC?
Muddo aan fogayn waxaan awoodnay inaanu kugu wargalinno wararka ku saabsan inuu imaan doono dalabka WhatsApp ee loogu talagalay iPhone oo hadda waxaan kuu keenay ‘war cusub’ ama, taa badalkeed, xantaas oo farxad gelin doonta isticmaaleyaal badan oo aad u faraxsan. Sida muuqata kooxda horumarinta WhatsApp waxay ka shaqeynayaan sameynta arji codsi oo loogu talagalay kombiyuutarada Mac iyo PC barnaamijkeeda farriinta caanka ah, taas oo kordhineysa tirada aaladaha ay la jaan qaadi karto oo cidda ay bilaabi lahayd ay soo dhowdahay.
Warkaan waxaa xaqiijiyay qaar ka mid ah khadka qoraalka oo ay u direen kooxda WhatsApp kooxda koobiyeyaasha Adeegsiga WhatsApp. Sida aad ku arki karto sawirka hoose, khadadka cusub ee code code qaar ka mid ah walxaha waxay u muuqdaan sida “Soo degso Windows” Kuwee “Soo degso Windows-ka” ama ‘Ma on Mac? »Kee noqon laheyd ” Ma isticmaaleyso Mac ‘, Waxaan sidoo kale helnaa xubno sida’ Mac ama Windows PC? “(” Mac ama PC leh Windows?
Illaa iyo hadda wax faahfaahin ah lagama ogaanin waxa ku saabsan, sidaa darteed waqtiyada ay horumariyayaashu u maareeyaan bilaabista codsigan wali lama oga, hase yeeshe, waxaa la rumeysan yahay in wax badan ugama hadhin imaanshaha barnaamijka rasmiga ah ee WhatsApp ee loogu talagalay Mac iyo PC. Dabcan, waxaan horeyba u ognahay in waqtiyada furitaanka la dheereyn karo, in kasta oo dareenka la soo saaray uu yahay in uu dhowaan imaan doono. Marka loo eego nooca Apple Watch, ma jiro wax war app ah oo loogu talagalay saacadda Apple.
Sawirka labaad ee aad arki kareysid wuxuu u dhigmaa fikrad ah sida app loogu arki karo kombiyuutarada Apple, sidaa darteed maahan shaashadda dhabta ah ee WhatsApp ee kumbuyuutarrada leh OS X Yosemite.
Dabcan, markaan ogaanno faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Codsiyada WhatsApp ee Mac iyo WhatsApp ee PC, waan kula soo socodsiin doonnaa.